Warkii.com-News and information about Somalia RW Xasan Kheyre oo siyaasad lama filaan ah ku qanciyay Madaxda Maamul goboleedyada & Wasiirada ay heli…. - Warkii.com-News and information about Somalia
RW Xasan Kheyre oo siyaasad lama filaan ah ku qanciyay Madaxda Maamul goboleedyada & Wasiirada ay heli….
Ra’isul wasaaraha DF Soomaaliya ayaa dhexda uga jira dadaalkii ugu dambeeyay ee uu ku doonayo inuu kusoo magacaabo golaha wasiirada.
Warar lagu kalsoon yahay oo la helayo ayaa sheegaya in wasiirada cusub lagu dhawaaqi doono arbacada soo socota hadii aysan ka hormarin.
Laakiin Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa wal wal xoogan ka qaba sida ay madaxda maamul goboleedyada qaar ugu lug leeyihiin soo xulashada Wasiirada, maadaam ay codsiyo badan soo gaarsiiyeen xafiiska RW Xasan.
Maamuladda Jubbaland iyo Puntland ayaa lasoo sheegayaa iney doonayaan in xilal sar sare ay ku yeeshaan wasiirada cusub.
Wasaarada Maaliyadda ayaa ah wasaarad ay si weyn isugu haystaan labadaas maamul, halka sidoo kale la ogaanayo in Ra;isul wasare Xasan Cali Kheyre uu wasaarado kale siiyay labadaas maamul.
Ilo wareedyada ayaa sheegaya in Puntland ay heli doonto wasiiro ay kamid yihiin Cadaalada iyo Waxbarashada, halka Jubbaland loo qorsheeyay wasaaradaha kala ah Warfaafinta iyo Wasaaradda Gaadiidka & Duulista Hawada.
Maamulka Galmudug ayaa la filayaa iney xubnaha wasiirada ka helaan Wasaaradaha Arimaha gudaha, waxaan ay ubadan tahay iney wasiir kale heli doonin maadaama madaxweynaha uu kasoo jeedo Galmudug.
Maamulka Koofur Galbeed ayaa la ogaanayaa inuu heli doono wasaarada Gaashaandhiga iyo sidoo kale wasiir kale oo heerkiisu yahay B, halka Somaliland ay heli karto Wasiirka arimaha dibadda.
Maamulka H/Shabeelle ayaa isna la filayaa inuu golaha wasiirada ku heli doono Ra’isul wasaare ku xigeen ahna wasiirka maaliyadda, waxaa kale oo la filayaa in wasiir kale oo heerkiisu yahay B ay ka helaan xukumadda.
Beelaha kale ee Soomaalida ay ahaa xaquuq lamid ah kuwa beelaha kale heli doona waxaana xilalka ay kasoo muuqan karaan kamid ah kuwa heerkoodu sareeyo.
Waxaa jiri kara in RW Xasan Kheyre uu badalo siyaasadiisa magacaabida wasiirada, maadaama wali ay socdaan latashiyadii lagu soo bandhigayay golaha wasiirada.